नेप्सेमा ‘प्यानिक सेल’ जारी, २०२० को सपोर्टमा थामियो बजार ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»नेप्सेमा ‘प्यानिक सेल’ जारी, २०२० को सपोर्टमा थामियो बजार !
नेप्सेमा ‘प्यानिक सेल’ जारी, २०२० को सपोर्टमा थामियो बजार !
By लाल्टिन डट कम June 7, 2022 Updated: June 7, 2022 No Comments3 Mins Read
आज मंगलबार ४५.५९ अंकले घटेर २.२१ % गिरावटको साथ नेप्से परिसूचक २०२०.२३ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २३४ कम्पनीमध्ये १५ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १८१ कम्पनी ओरालो लागेका छन् भने शून्य कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
बजार पुँजीकरण घटेर २८ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: June 7, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर बढेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः३६५) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी ज्यादै बढेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा पनि तल २०२०.२३ मा बन्द भएको छ। आज बजारमा बिक्रीकर्ता हावी भएको देखिन्छ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन घटेर जिरो लाइन भन्दा तल -८०.१९ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम घटेर नेगेटिभ १२.६१ मा आएको छ। एमएसिडी लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर तल निरन्तर गईरहेको देखिन्छ। सिग्नल लाइन घटेर जिरो लाइन भन्दा तल – ६७.५८ मा आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज बिक्रीको मोमेन्टम धेरै नै बढेको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरका अनुसार आज +१४ डिएमआई लाइन तल र -१४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ। सिग्नल लाइन पनि माथितर्फ बढीरहेको देखिन्छ। +१४डीएमआई लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर निरन्तर तल गईरहेको छ। आज – १४ डिएमआई लाइनको माथि फर्किने मोमेन्टम बढेको छ जसले बजारमा बिक्री झन् बढेको जनाउँछ।
आज नेप्सेले बियरिश क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा ‘प्यानिक सेल’ भएको सङ्केत गर्छ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -५७७३ देखि घटेर – ५९३९मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ३१९८३३९ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(२९०८८११) को ११० प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड भन्दा थोरै तल २०२०.२३ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल – ८०.१९ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन भन्दा तल – ६७.५८ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम हिजोभन्दा घटेर –१२.६१ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्रीकर्ता हावी भएको देखाउँछ।
+१४ डिएमआई लाइन तल र -१४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ। सिग्नल लाइन पनि माथितर्फ बढीरहेको देखिन्छ। +१४डीएमआई लाइनले माथिबाट सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर निरन्तर तल गईरहेको छ। आज – १४ डिएमआई लाइनको माथि फर्किने मोमेन्टम बढेको छ जसले बजारमा बिक्री झन् बढेको सङ्केत गर्छ। आज आरएसआइ २४.४९ बाट घटेर २१.६० मा पुगेको छ जसले आरएसआइको मोमेन्टम घटेको र बजार ओभर सोल्ड जोनमा फसेको जनाउँछ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट १९८० को एरिया देखिन्छ भने नेप्सेको नजिकको अवरोध २०६५ को एरिया रहेको देखिन्छ।#nepsetech